Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ ): Neerja (2016) မြန်ုမာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၈၆ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့မှာ Pan
Am 73 လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲ ခံရတဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ် တည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီ ဇာတ်ကားမှာ အဓိကဇာတ် ကောင်က အသက် (၂၃) နှစ်အ ရွယ် လေယာဉ်မယ်လေး နီရာဂျာ ဘာနော့ဖြစ်ပြီး ပြန်ပေးသမားတွေ ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးသည် ၃၆၁ ယောက်နဲ့ လေ ယာဉ်ဝန်ထမ်း ၁၉ ယောက် အ သက်အန္တရာယ်မရှိရလေအောင် ကာကွယ်ခဲ့တာကို
လေယာဉ်ပြန်ပေးသမား တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နီရာ ဂျာဟာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေ ပေမယ့်လည်း ခရီးသည်တွေ အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် ကြိုး စားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို ကြည့်ရတဲ့ အခါ အခက်ခဲဆုံးအနေအထားနဲ့
ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နီရာဂျာရဲ့ဖြစ် အင်ကို ကိုယ်ချင်းစာမိကြဦးမှာ ပါ။
နီရာဂျာဘာ နော့အဖြစ် ဆိုနမ်ကာပူးရ်က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား ပြီး ဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပရိ သတ်တွေကတော့ မှတ်ချက်ပြု ထားကြပါတယ်။
Allegiant (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Mermaid (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
My New Sassy Girl(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Independence day (1996) မြန်မာစာတန်းထိုး
'71 (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Left Behind (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
My Beloved Bodyguard(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Race ( 2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
I hate Luv Storys(2010)(မြန်မာစာတန်းထိုး)
24 (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Dead Lands (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Special Correspondents(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hannah Montana: The Movie (2009) HD 720P 500 MB မြ...
My Way(2011) - မြန်မာစာတန်းထိုး
House Full3(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Colonia Dignidad (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Danish Girl (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ကမ္ဘာမြေရဲ့နတ်ဆိုးမိစ္ဆာ - ဟစ်တလာ (သို့မဟုတ်) Hitler...
The Intimate (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
Mid Nigh Special (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Wall-E (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hansel and Gretel:Witch Hunters(2013) မြန်မာစာတန်း...
Ugly Duckling Don't (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Marauders (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Fighter In The Wind(2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Admiral Roaring Currents (2014) မြန်မာစာတန်းထိ...
Secret Travel (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၈+++
Stardust (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sixth Sense (1999) မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Mask (1994) မြန်မာစာတန်းထိုး
-Independence Day: Resurgence (2016) မြန်မာစာတန်းထ...
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)ြ...
Minority report (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sarkar Raj (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Piranha 3DD (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+
Zanjeer (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bloody Destiny (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Riot (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Penguins Of Madagascar (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Alice Through Looking Glass (2016) မြန်မာစာတန်းထို...
Lost in Hong Kong (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Good Dinosaur (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jarhead 2: Field of Fire (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး...
Bangkok Knockout (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Golden Compass (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mission Istaanbul (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Heaven’s Solider (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
Satyagraha (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Intern (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Rocky Handsome (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Daddy's Home (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sanam Teri Kasam (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Finding Dory 2016(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Cell (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Detective Byomkesh bakshy (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Eddie the Eagle (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Special Chabbis 26 (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mostly Ghostly Finish (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Batman v Superman Dawn of Justice 2016(မြန်မာစာတန်...
The Choice (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Messengers (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mighty Morphin Power Rangers:The Movie (1995) (မြန...
Eye In The Sky (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Source Code (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bridge To Terabithia (2007) - မြန်မာစာတန်းထိုး